UDa Gama nesicelo kwiSafa ngeBafana | News24
UDa Gama nesicelo kwiSafa ngeBafana
Durban - Ufuna ukuqhubeka nokusebenza ebhentshini leBafana Bafana u-Owen Da Gama obebambe izintambo zokuqeqesha kuleli qembu okwesikhashana.
UDa Gama ubenikwe yiSouth African Football Association (Safa) umsebenzi wokuhola leli qembu emidlalweni emibili yesihle.
Kowokuqala iBafana iguqise ngo-3-1 iGuinea Bissau ngeledlule eMoses Mabhida Stadium, eThekwini, ngoLwesibili kusihlwa ishayane yaze yabukana ne-Angola kuba ngu-0-0 eBuffalo City Stadium, e-East London.
UDa Gama izintambo usezinikela kumqeqeshi omusha okungakaziwa ukuthi ngubani kodwa okulindeleke ukuthi amenyezelwe maduzane njengoba kuthembise uMengameli weSafa, uDanny Jordaan.
UDa Gama uthi nakuba engakazi ukuthi ikusasa lakhe limi kuphi kodwa uzimisele ngokuqhubeka nokuhlala ebhentshini leBafana ukuze asize umqeqeshi ozayo.
OLUNYE UDABA: Kuzocaca namuhla ngekusasa lomqeqeshi obangwayo
"Le midlalo emibili esibe nayo ingivule amehlo ngebhola lakuleli ngakho-ke ngiyafisa ukuba yingxenye yethimba labaqeqeshi njengoba kuzomenyezelwa omusha maduzane. Angifuni ukuqamba amanga angazi ngimiphi ngekusasa lami ngoba mhlawumbe umqeqeshi ozofika uzokhahlela kwasani esebhentshini, eze nethimba lakhe.
"Ngikulangazelele ukubona ukuthi ngubani ozoqashwa futhi ngiyafisa kube ngumuntu ozovuma ukusebenza nathi ngoba sisuka kude naleli qembu. Kuza imidlalo enzima yokuhlungela iNdebe yoMhlaba ezokuba seRussia ngakho-ke kubalulekile ukuthi ngifake isandla ngoba okuningi ngiyakwazi futhi ngikubonile sihambisana nozakwethu," kusho uDa Gama.
Ubonga ithuba alinikwe yiSafa ukuhola leli qembu kule midlalo emibili.
"Kule midlalo sizifezile izinjongo zethu. Obekumqoka kunakho konke bekuwukubona abafana abancane ukuthi bamisa kanjani ezingeni eliphakeme. Ngigculisekile ngengikubonile, ikusasa lethu liqhakazile.
"Ngiyabonga kakhulu kubaqashi bami ngokungethemba banginike iqembu. Ngikholwa wukuthi kangibenzelanga phansi. Ngibonge nakubantu baseNingizimu Afrika abaseke leli qembu kule midlalo ngithi bangagcini kodwa baqhubeke njalo ngoba leli yiqembu labo akulona elamuntu," kusho uDa Gama.